Ciidamada Eretria oo loogu Baaqay in ay ka Baxaan Gobolka Tigray
Wasiirada arimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah G-7 ayaa ku baaqay in si "deg deg ah, oo shuruud la’aan ah lana xaqiijin karo" ciidamada Eritrea lagaga saaro gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia.
Wasiirrada dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka oo Jimcihii kulan sanadeedkoodu uu ka dhacay magaalada Berlin ayaa soo saaray bayaanka ku soo beegmay ka dib markii dhawaan uu Ra’iisulwasaaraha Ethiopia Abiy Axmed shaaciyay in uu la hadlay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo ka oggolaaday in uu ciidamada Eritrea kala baxo gobolka Tigray.
“Wadahadalladeenii aan 26-kii March 2021 yeelannay madaxweyne Isaias Afwerki intii aan booqashada ku joogay Asmara, dowladda Eretria waxa ay oggolaatay in ay ciidamadeeda kala baxdo xadka Ethiopia,” ayuu Abiy ku yiri qoraal lagu daabacay boggiisa Twitter-ka.
Wasiirrada G-7 ayaa ku boorriyay dhammaan dhinacyada in ay muujiyaan "xakameyn buuxda, hubiyaan ilaalinta dadka rayidka ah ayna ixtiraamaan xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah."
Wasiiradu waxa kaloo ay walaac qotodheer ka muujiyeen warbixinnadii dhowaan soo baxay ee sheegayay "xadgudubyada iyo tacaddiyada xuquuqda aadanaha, iyo ku tumashada sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee gudaha Tigray."
Abiy ayaa bishii November guluf dagaal ku qaaday gobolka Tigray ka dib markii uu sheegay in ciidamada jabhadda TPLF ee maamuleysay gobolka Tigray ay weerareen fariisimada ciidamada dowladda federaalka.